कारमा मृत फेला परेका ३ बालकको शरीरमा कुनै चोटपटक देखिएन - PT Online News
कारमा मृत फेला परेका ३ बालकको शरीरमा कुनै चोटपटक देखिएन
२१ बैशाख, २०७८ ०८:२३
दाङ। तुलसीपुरको स्याउली बजारमा बैशाख १८ गते बेलुका एउटै कार भित्र मृत फेला परेका तीन बालकको शवको पोष्टमार्टम भएको छ । पोष्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार तीनै जना बालकको शरीरमा कुनै पनि चोटपटक नदेखिएको भन्ने जानकारी आएको दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी गणेश चन्दले बताएका छन् ।
पोष्टमार्टम रिपोर्टले तीन बालकको मृत्यु कर्तव्य गरि हत्या भएको भन्ने नदेखिएको जानकारी उनले दिए । तर, लक गरि राखेको कार भित्र तीन बच्चा कसरी भित्र पसे भन्ने कुरा रहस्यमय रहेको एसपी चन्दले बताए । एसपी चन्दले भने– ‘चालकले माघ १ गतेदिख कार लक गरि पार्किङमा राखेको हुँ भन्ने बयान गरेका छन्, त्यसो हो भने तीन बालक कसरी कारभित्र प्रवेश गरे त्यो कुरा रहस्यमय छ ।’
प्रहरीले कारको लक तोडेरै तीन बालकको शव बैशाख १८ गते राति मात्रै निकालेको थियो । भारतीय नम्बर प्लेटको पार्किङ कार भित्र तीन बालक मृत अवस्थामा फेला परेपछि घटनाको सही ढंगले अनुसन्धान गर्न सकियोस् भनेर प्रहरीले बाँकेबाट तालिम प्राप्त कुकुर र तालिम प्राप्त प्राविधिक ल्याएको थियो । उनीहरु आएर आफ्नो अनुसन्धान सकेपछि मात्रै प्रहरीले कारको लक फोडेर शवहरु झिकेको थियो ।
कारभित्र मृत भेटिएका तीन बालक तुलसीपुर ६ बरुवागाउँ निवासी ६ वर्षीय करण परियार , ७ वर्षीय सुवास भनिने सुवर्ण परियार र ९ वर्षीय सन्दिप परियार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बैशाख १८ गते बेलुका स्थानीयले लामो समयदेखि पार्किङ गरि राखेको कारको सबै बत्तिहरु बलेको देखेपछि किन बत्ति बल्यो ? भनेर हेर्न भनेर गएपछि कारभित्र तीन बालकको शव देखेका थिए । चोट पटकले उनीहरुको मृत्यु भएको हैन भन्ने पोष्ट मार्टम रिपोर्टले देखाएपनि अरु कुन कारणले उनीहरुको मृत्यु भएको हो ? त्यो कुरा रिपोर्टले देखाउन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ ।
बैतडीमा वडा सदस्यको शब बोकेको जिप दुर्घटना हुदा ५ जनाको...
साइकलबाट लडेर झापामा दयालाल राजवंशी मृत्यु